लोकसेवाको परीक्षा स्थगित, अब कहिले खुल्छ ? « Postpati – News For All
लोकसेवाको परीक्षा स्थगित, अब कहिले खुल्छ ?
असोज ३०, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले हालै जारी गरेको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
रिट निवेदक कोरोना संक्रमणबाट उपचाररत रहेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्न आयोगले आदेशमा भनेको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार आयोगले असोज २८ गते नै परीक्षा स्थगित गरेको हो । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।